सिदार्थ डान्सिङ एण्ड सिङ्गिङ आईडल सम्पन्न – samyantra.com
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ ०९, २०७४ समय: ५:५४:२५
सुन्दरहरैचा नगरपालिकामा सिदार्थ मा.वि को प्रथम सिदार्थ डान्सिङ एण्ड सिङ्गिङ आईडल २०७४ सोमबार सम्पन्न भएको छ ।
सुन्दरहरैचाको वाड नं. १० मा अवस्थित सिद्र्धथ मा.वि को आयोजनमा गायन तथा नृत्य प्रतियोगिता २ सय भन्दा बढी विद्यार्थी प्रतियोगीहरु सहभागी भएका थिए । मङ्सिर देखी सुरु भएको प्रतियोगिता ५ औँ चरणमा फाईनल प्रतियोगीहरु नृत्य तर्फ २४ जना र गायन तर्फ १२ जना बाकी रहेका थिए । सोही प्रतियोगी तर्फबाट जुनियर प्रथम सिदार्थ आईडल र सिनियर प्रथम सिदार्थ आईडलको घोषण गरिएको थियो ।
नृत्य तर्फ १ देखी ३ कक्षा सम्मका जुनियर समुहबाट प्रथम सिदार्थ जुनियर डान्सिङ आईडल पलपसा श्रेष्ठ घोषित भएका छिन भने फस्ट रनरअप राइना राई र सेकेन्ड रनरअप युनिसा थापा भएकी छिन । ४ देखी ६ सम्मका जुनियर समुहबाट मैसम लिम्बु प्रथम सिदार्थ जुनियर डान्सिङ आईडल घोषित भएका छन भने फस्ट रनरअप खुस्बुका श्रेष्ठ र सेकेन्ड रनरअप नितिसा भन्डारी भएकी छिन । ७ देखी १० कक्षा सम्मका सिनियर समुहबाट प्रथम सिदार्थ सिनियर डान्सिङ आईडल अरपर्ण राई घोषित भएका छन । क्रमस फस्ट रनरअप सिमा राई र सेकेन्ड रनरअप सुप्रिया श्रेष्ठ भएकी छिन ।
गायन तर्फ १ देखी कक्षा ६ सम्मका जुनियर समुहबाट प्रथम सिदार्थ जुनियर सिङ्गिङ आईडल सिवानी लिम्बु भएकी छिन । फस्ट रनरअप अलिमा लिम्बु र सेकेन्ड रनरअप सचिन पराजुली घोषित भए ।
७ देखी कक्षा १० सम्मका सिनियर समुहबाट प्रथम सिदार्थ सिनियर सिङ्गिङ आईडल दियोग ढकाल भएका छन । क्रमस फस्ट रनरअप प्रियङ्का सोडारी भईन भने सेकेन्ड रनरअप आर्दश गजमेर भएका छन ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी तथा सांसद राजकुमार ओझाले विद्यार्थीहरुको कला प्रस्तुती हरेर सिदार्थ मा.वि राष्ट्रको कर्णदार उत्पादन गर्ने र ब्यबहारिक शिक्षा प्रदान गर्ने एक नमुना विद्यालय भएको बताए ।
फाईनलमा पुगेका सबै प्रतियोगीहरुलाई बिभिन्न बिद्यामा पुरस्कृत गरेका थिए । यसो गर्दा कुनै पनि प्रतियोगी विद्यार्थीहरुको आत्मावल नघट्ने र प्रोत्सान पनि हुने सिद्र्धथ मा.विमा प्रिन्सिपल अर्जुन बस्नेतले बताए । सिद्र्धथ डान्सिङ एण्ड सिङ्गिङ आईडल बार्षिक रुपमा हुने वस्नेतले जनकारी दिएका छन ।
कार्यक्रमको उद्घोषक कक्षा १० मा अध्ययनरत अनमोल राई र महिमा घिमिरेले गरेका थिए भने स्कुलका भाईस प्रिन्सिपल जे.वि. थुलुङले उद्घोषण सहयोगीको भुमिका निर्वहा गरेका थिए ।
त्यसैगरी सुन्दरहरंैचाको सलकपुरमा अबस्थित ब्राइट फ्यूचर मा.वि.ले पनि सरस्वती पुजाको अवसरमा गायन तथा नृत्य प्रतियोगिता कार्यक्रम सप्पन्न गरेको छ ।
विद्याकी देवी सरस्वतीको पुजा तथा श्री पञ्चमीको पवन अवसरमा सुन्दरहरैंचाको टेन्डरफिट, जुपीटर ,माउष्ट मकालु, मदरल्यान्ड मावि , ज्ञानज्योति , पंचायत मावि ,सुकुना बहुमुखी क्याम्पस ,सुकुना मावि, सुविजीमुर मेमोरियल .मावि, प्रभात किरण,स्कोइट बो.स्कुल, स्कलर्स होम , रोजाई मन्टेश्वरी,जनता मावि,एचएम मन्टेश्वरी,दराइजिड.,हरैचा मोडल, सामुदायिक सरस्वती, इन्द्रपुर नमुना मावि,ब्रिटीस ल्याड.गोज, तथा बेलवारीको शिक्षा सन्देस, सगरमाथा बोडिड.स्कुल, गोदावारी आवासीय विधा मन्दिर लगायतका निजी तथा समुदायिक विधालयहरुले पनि हर्सोंउल्लासका साथ सरस्वती पुजा मनाएका छन् । – खनेन्द्र कुमार राई(अर्जुन)